बजाजले ल्यायो एक लिटर मै १०० किलोमिटर माइलेज दिने नयाँ बाइक, मूल्य सुन्दा पर्नु हुनेछ चकित – ताजा समाचार
बजाजले ल्यायो एक लिटर मै १०० किलोमिटर माइलेज दिने नयाँ बाइक, मूल्य सुन्दा पर्नु हुनेछ चकित
काठमाडौँ, ९ साउन । युवाहरुले अत्यन्तै रुचाएको ब्रान्ड बजाजले नया इकोनोमी बाइक बजारमा ल्याएको छ । बजाजले नयाँ सीटी ११० बाइक लन्च गरेको हो । जसको मूल्य अत्यन्तै सस्तो छ भने माइलेज पनि अत्यन्तै धेरै दिने छ ।
कम्पनिले बजाज सीटी १०० लाई अपग्रेड गरेर यो मोडल ल्याएको हो । यसमा ११५ सिसिको इन्जिन रहेको छ । जसले ८.६ बीएचपीको पावर र ९.८१ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ ।
पुरानो सिटी १०० भन्दा फरक लुकमा रहेको यस बाइकमा सेमी नाभी टायर जडान गरिएको छ । जसलाई जुनसुकै सडकमा पनि गुडाउन सकिने कम्पनीले दावी गरेको छ । दुबै टायरमा ड्रम ब्रेक भएपनि । एन्टी स्किड ब्रेक समावेश गरिएको छ र यो बजाजको कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम हो ।
बजाजको सबै भन्दा धेरै माइलेज दिने यस बाइकले एक लिटरमा १०० किलोमिटर भन्दा बढी गुड्छ । दुई भेरिएन्टमा आउने किक स्टार्ट वालाको मूल्य ३७ हजार ९९७ भारू र सेल्फ स्टार्ट वालाको ४४ हजार ३५२ भारु रहेको छ ।
यी हुन् नेपाली बजारमा पाइने सबै भन्दा सस्तो अनि सबै भन्दा धेरै माइलेज दिने ५ बाइकहरु, प्रति लिटर ८० देखि ९६ किलोमिटर सम्म गुड्ने (बाइकको मुल्य सहित)
साझापेज । काठमाडौँ । नेपाली सडक र नेपालीको आयश्रोतको आधारमा मोटर साइकल सबैको रोजाईमा पर्ने सवारी साधन हो । हुनत नेपाली बजारमा ७०-८० लाख रुपैया सम्मको मोटरसाइकल पनि उपलब्ध छ तर ति मोटरसाइकल एकादले मात्र खरिद गर्न सक्छन । नेपाली सडकमा प्राय मध्यम मूल्य कै मोटरसाइकल गुडिरहेको हुन्छन ।
आज हामी निम्न आर्थिक आयश्रोत भएका तर मोटरसाइकलको आवश्यक वा रहर भएकाहरुलाई उपयुक्त ५ मोटरसाइकलको बारेमा जानकारी दिंदै छौ । यी मोटरसाइकलहरु ९७ देखि ११० सिसि सेग्मेन्टमा छन । यी मोटरसाइकलहरु किन्नमा सस्तो मात्र हैन किनी सकेपछी पनि किफायती रहने छन् । कारण, यी ५ मोटरसाइकलले धेरै माइलेज दिने छ साथै कुनै पार्ट टुटफुट भएमा पनि निक्कै सुलभ मूल्यमा पार्ट पुर्जाहरु पाइने छ । त्यति मात्र हैन नेपाल सरकारले लगाउने करहरुमा पनि सानो सिसिका मोटरसाइकलमा भारी छुट छ । अब जानौ ति ५ मोटरसाइकलहरुको फिचर र हाल नेपाली बजारमा पर्ने मूल्यको बारेमा :
१. टीभीएस स्टार स्पोर्ट
टीभीएस स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकल टीभीएसको सबै भन्दा बढी माइलेज दिने १०० सिसी सेग्मेन्टको मोटरसाइकल हो । यो मोटरसाइकल टीभीएसको सबै भन्दा बढी माइलेज दिने मोटरसाइकल हो । यसको वजन १०८ केजी छ भने फ्युल ट्यांक १२ लिटरको रहेको छ ।
इन्जिन : 100 सीसी
पावर : 7.4 पीएस
टर्क : 7.5 एनएम
माइलेज : 87 kmpl
मूल्य : रु. १,५६,९००
मूल्य : रु. १,५९,९००
३. टीभीएस स्टार सिटी प्लस
टीभीएस स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकल टीभीएसको सबै भन्दा बढी माइलेज दिने ११० सिसी सेग्मेन्टको मोटरसाइकल हो । यो मोटरसाइकलमा सेमी डि‍जि‍टल इंस्‍ट्रूमेंट कॉनसोल रहेको छ । साथै यो इलेक्ट्रोनिक स्टार्टमा उपलब्ध छ । यी ५ मोटरसाइकल मध्य सबै भन्दा ठुलो सिसि भएको मोटरसाइकल यहि हो ।
इन्जिन : 109.7 सीसी
पावर : 8.4 पीएस
टर्क : 8.7 एनएम
माइलेज : 86 kmpl
मूल्य : रु. १,६२,९००
४. हीरो एचएफ डीलक्‍स
मूल्य : रु. १,६३,५००
मूल्य : रु. १,७३,५००